Bahlomle abahlali baseKhayelitsha ngendima eyadlalwa yi Komishoni yeNyani noXolelwaniso (TRC) – Elitsha
Bahlomle abahlali baseKhayelitsha ngendima eyadlalwa yi Komishoni yeNyani noXolelwaniso (TRC)
26th July 2016 Mzi VelapiEdition 7 0 Xhosa
Abo bebegcwalise iholo lesakhiwo esitsha Isivivana esingase Khayelitsha Mall. Photo: ifoto ithathwe ngu Mzi Velapi
KwiMbizo ebeququzelelwe yi Institute for Justice and Reconciliation (IJR) abahlali base Khayelitsha ingakumbi ulutsha luye lwahlomla ngeKomishoni Yenyani noXolelwaniso eyayibanjwe ngonyaka ka 1996.
Le komishoni yasekelwa ukukhuthaza ubunye noxolelwaniso, ngokuhlaziya amalungelo wabantu nabo ababengamaxhoba ngokujonga indlela ezithile zembuyekezo. Ngokwalekomishoni imbuyekezo icaciswa ngendlela ezinininzi eziquka intlawulo, intlawulo enganyanzelekanga, imbuyekezo, ukubuyiselwa kwimeko yesiqhelo yobomi nokwamkeleka. Ngexesha ethetha ne Elitsha okhokela icandelo lezicwangciso nokonyuswa kwengxowa u Juzaida Swain uthe le yenye yeengxoxo abazibamba ekuhlaleni ukujonga impumelelo nendawo eyathi eyasilela kuyo ikomishoni yeNyani noXolelwaniso.
Umxholo we ngxoxo ubojongene nokungalingani kwezoqoqosho nokungalingani kwezentlalo. Loka Swain uthi ezingxoxo kukufumanisa indlela abantu abaziva ngayo nobomi ababuphilayo emva kwe komishoni eyayikhokelwa ngu Archbishop Desmond Tutu.
Ngelixa lengxoxo, iye yagxekwa kakhulu le komishoni ngokungabuyiseli isidima sabantu abamnyama nokuqinisekisa ukuba uqoqosho nabo babengamaxhoba bayabuyekezwa. Olitshantliziyo uKarabo Monatisi uye wathetha ngokungalingani kwezemfundo phakathi kwezikolo zaselokishini nezikolo ezazifudula izezabelungu. Uye waphakamisa nendlela abaphathwa ngayo abo babeqhanqalazela imivuzo e Marikana ngonyaka ka 2012. Abantu abaninzi abathe bahlomla bathethe ngolungalingani kwezoqoqosho ingakumbi umba wokungabuyiselwa komhlaba kubantu abamnyama.
Ukanti izithethi eziye zabayinxalenye yengxoxo nezithe zafumana ithuba lokuhlomla phambi kwenginginya ebizalise iholo yakwa Sivivana , singabala kubo uPhumeza Mlungwana we-Social Justice Coalition, Gcobisa Yani we-Open Stellenbosch, Ayanda Nyoka we-IJR kwakunye Mbali Matandela we-Rhodes Must Fall, ye Yunivesiti yeaseKapa.
Xa bebequkumbela intetho yabo u-Phumeza uye wagxininisa ngelithi kufuneka uluntu lusebenzise ulwazi oluqukwe kwiingxelo zekomishoni ukufunda ngenkokheli eziselulawulweni kwanendlela ezicinga ngayo. “Kufuneka sisebenzise ezikomishoni nalapho zithe zasilela khona ukuqinisekisa ukuba abantu bakuthi bayaxhamla kwaye iimfuno zabo ziyafezekiswa”, utshilo lo ka Mlungwana. i-SJC yenye yemibutho yasekuhlaleni eyathi yathabatha inxaxheba enkulu kwiKhomishoni yase Khayelitsha eyafumanisa ukungasebenzisani kwabahlali namapolisa. Ukanti uAyanda Nyoka we IJR uye waphakamisa ukusetyenziswa komgaqo-siseko, ukulwelwa amalungelo ezentlalo nezoqoqosho.
Kwelakhe icala uGcobisa Yani we-Open Stellenbosch uye waphakamisa indlela ekufuneka kubuyiselwe ngayo isidima somntu omnyama ingakumbi amakhosikazi antsundu. “Oomama abasebenza ekhitshini eziYunivesiti kufuneka babenesidima ngendlela efanayo ne-Nqununu”, utshilo loka Yani. Egqibezela, uMbali Matandela we-Rhodes Must Fall uye wathetha ngendlela urhulumente athi aqulunqe ngayo ikomishoni ezithi zingezi naziphumo zincumisayo kwabo bachaphazelekayo. “Nangoku kwasekwa ikomishoni yokujonga into yentlawulo kwindawo zemfundo”.
Also read: Imibutho emele uluntu yase Khayelitsha ukuvuyele ukwalelwa ngebheyile kwabo batyholwa ngokudlwengula noku bulala
Ulutsha lwase Khayelitsha luye lwahlohla umphathiswa negqiza lakhe ngemibuzo
Uninzi lwabahlala kwimbacu bathi bavotele izindlu, imisebenzi nezindlu zangasese
Water bill arrears shock for pre-paid electricity buyers posted on September 13, 2016
Lindaba zakutshanje kwibhokisi yakho, veki nganye.
Archives Select Month May 2021 (1) October 2020 (1) September 2019 (2) August 2019 (3) April 2019 (1) September 2018 (1) July 2018 (1) May 2018 (5) April 2018 (3) March 2018 (1) February 2018 (1) January 2018 (2) December 2017 (3) November 2017 (2) October 2017 (4) September 2017 (4) August 2017 (4) July 2017 (4) June 2017 (5) May 2017 (3) April 2017 (4) December 2016 (2) November 2016 (4) October 2016 (3) September 2016 (3) August 2016 (4) July 2016 (3) June 2016 (4) June 2014 (3)
Categories Select Category Editions (28) Edition 10 (2) Edition 11 (2) Edition 12 (2) Edition 13 (1) Edition 14 (4) Edition 6 (4) Edition 7 (3) Edition 8 (4) Edition 9 (4) Trial edition 2 (2) Elitsha newspaper (2) Ezasemisebenzini (8) Ezemfundo (12) Ezemidlalo (2) Ezempilo (5) Iyavela (52) Iziphaluka (53) Cape Town (42) East London (11) Oorhulemente basemakhaya (20) Uncategorised (32)